COVID-19 संसाधन | Carewell SEIU 503
COVID-19 ले हाम्रो समुदायमा टोल लिने काम जारी राख्ने क्रममा, हामी गृहसेवा र व्यक्तिगत सहयोगी कामदारहरूलाई सकेसम्म बढी राहत प्रदान गर्ने उपायहरू खोज्दैछौं। न्यास बोर्डले निम्न लाभ वृद्धि पारित गर्यो।
COVID-19 भुक्तानी समय बन्द लाभ
योग्य कामदारहरूको लागि off० घण्टा सम्म भुक्तान गरिएको छुट
आफैलाई बचाउनुहोस्, अरूलाई सुरक्षित गर्नुहोस्, र हामीलाई यो महामारीलाई हराउन मद्दत गर्नुहोस्।
यदि तपाईं Carewell SEIU 503 सुविधाहरूको लागि योग्य हुनुहुन्छ भने, अब तपाईं COVID-19 होम टेस्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंलाई कुनै शुल्क बिना!
धेरै होमकेयर र व्यक्तिगत समर्थन कामदारहरूले कागजात गर्नका लागि अनुरोध गरे कि उनीहरू हेरचाह प्रदायक हुन्, र त्यसैले आवश्यक कामदारहरू।
यदि तपाईंले २०२० वा २०२१ मा COVID-१ hours को कारणले घण्टा हराउनुभयो भने, तपाईं थप PTO सुविधाहरूको लागि योग्य हुन सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईंले मार्च १०- मे १ 16, २०२० घण्टा गुमाउनुभयो भने, तपाईं कठिनाई पीटीओ सुविधाहरूको लागि योग्य हुन सक्नुहुन्छ। आवेदन दिनको म्याद मे १,, २०२१ हो।
यदि तपाईंले जनवरी १, २०२१ पछि घण्टा गुमाउनु भयो भने, तपाईं COVID PTO सुविधाहरूको लागि योग्य हुन सक्नुहुन्छ। थप जानकारीको लागि पढ्न जारी राख्नुहोस्!
COVID-19 PTO लाभ को माध्यमबाट, योग्य कामदारहरूले paid० घण्टा सम्म भुक्तान गर्न पाउने छुट पाउन सकिन्छ। तपाईं योग्य हुन सक्नुहुन्छ:
COVID-19 मा सम्बन्धित पाँच योग्य कारणहरू मध्ये एकमा तपाईंले जनवरी १, २०२१ पछि घण्टा गुमाउनुभयो ;
तपाईंले कम्तिमा working० घण्टा काम गर्न योग्य पात्र कार्य घण्टा (सम्झौता युनिट घण्टा पनि भनिन्छ), तीन महिना मध्ये एउटामा जुन तपाईंले त्यो घण्टा गुमाउनुभयो अघि; र
बेनिफिट प्रशासकीय अफिसको साथ तपाईंसँग फाईलमा एक W-9 छ।
यो लाभ कोष (लगभग $1.5 लाख) खर्च नभएसम्म उपलब्ध हुनेछ। हामी तपाईंलाई योग्य हुन सक्दो चाँडो आवेदन दिन प्रोत्साहित गर्दछौं।
जनवरी १, २०२१ पछाडि तलका पाँच कारण मध्ये एक कारणले योग्य कामका घण्टा हराएको छ; र
आवश्यकता १: जनवरी १, २०२१ पछाडि कामको घण्टा हराएको एउटा कारणका लागि:
तपाईंसँग COVID-19 को लक्षणहरू छन् र एक योग्य मेडिकल पेशेवर द्वारा सक्रिय रूपमा चिकित्सा निदानको खोजीमा हुनुहुन्छ;
* एक योग्य चिकित्सा पेशेवर एक चिकित्सा सेवा प्रदायक हो जो इजाजतपत्र प्राप्त हुन्छ र चिकित्सा सेवाहरू प्रदान गर्न प्रशिक्षित हुन्छ। यसमा चिकित्सकहरू, चिकित्सक सहायकहरू, नर्स चिकित्सकहरू, र पंजीकृत नर्सहरू सामेल छन्। यस लाभको उद्देश्यको लागि, स्थानीय जनस्वास्थ्य प्राधिकरणहरू जस्तै ओरेगन स्वास्थ्य प्राधिकरणसँग काम गरिरहेका सम्पर्क ट्रेसर्सलाई योग्य पेशेवर मानिन्छ।
यो लाभको लागि योग्य हुन, तपाईंले कम्तिमा 40० घण्टा काम गरेको हुनुपर्दछ तीन महीनामध्ये एकमा जसमा तपाईंले ती घण्टा गुमाउनु भन्दा पहिले।
उदाहरणका लागि, यदि तपाईंले फेब्रुअरी २०२१ मा घण्टा गुमाउनुभयो भने, तपाईंले योग्य हुनको लागि जनवरी २०२१, डिसेम्बर २०२० वा नोभेम्बर २०२० मा कम्तिमा 40० घण्टा काम गर्नु आवश्यक छ।
COVID-19 PTO सुविधाहरू कर योग्य छन्; त्यसकारण, तपाईसँग फाईममा W-9 फारम प्रशासनिक अफिसको साथ हुनु पर्दछ। यदि तपाईंसँग बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेटेड अफिसको साथ फाईलमा W-9 छ कि छैन भनेर अनिश्चित हुनुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई सिफारिस गर्दछौं एक भुक्तानी भुक्तानीमा ढिलाइ हुनबाट जोगाउन।
COVID-19 भुक्तानी समय बन्द बारे मा सामान्य प्रश्नहरू पढ्नुहोस्।
म कसरी थाहा पाउन सक्छु यदि म COVID-19 PTO सुविधाहरूको लागि योग्य छु?
जनवरी १, २०२१ पछाडि कभर गरिएको कामहरू हराएका छन् किनकि तल उल्लेखित पाँच कारण मध्ये एउटा हो; र
योग्य हुनको लागि, तपाईंले जनवरी 21, २०२१ पछाडि निम्न reasons कारणहरूमध्येमा कभर गरिएको घण्टा हराउनुपर्नेछ:
यदि तपाईं योग्यता आवश्यकताहरू पूरा गर्नुहुन्छ भने, तपाईं paid० घण्टा सम्म भुक्तानी गर्न सक्ने लाभहरू पाउन सक्नुहुनेछ।
के म COVID-19 PTO लाभको लागि एक भन्दा बढी पटक आवेदन दिन सक्छु?
हो! तपाईं कुनै पनि महिनाको लागि लाभको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ जब तपाईं माथिको मापदण्ड पूरा गर्नुहुन्छ, तर अधिकतम लाभ तपाईंले दावी गर्न सक्नुहुनेछ claim० घण्टा।
COVID-19 PTO लाभ गणना गरीन्छ त्यस्तै गरी तपाईको सशुल्क समय बन्द गणना गरीन्छ। तपाईको PTO बेनिफिटहरू पहिलो महिनामा तपाईले पाउनु भएको ज्यालाको आधारमा निर्धारण गरिन्छ तपाई योग्य बन्नुभयो - यस अवस्थामा, नोभेम्बर २०२० को रूपमा। धेरै हेरचाह प्रदायकहरूका लागि यो प्रति घण्टा १TP२T१... was थियो।
यदि मैले COVID-19 PTO सुविधाहरू दावी गर्छु भने, म अझै पनि अन्य प्रकारका PTO सुविधाहरू दावी गर्न सक्दछु (जस्तै नियमित PTO वा हार्डशिप PTO सुविधाहरू जुन २०२० मा उपलब्ध थिए)?
हो! तपाईले (र हुनु पर्छ) केयरवेल SEIU 3०3 PTO सुविधाहरूको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ जुन तपाईं नियमित PTO र कठिनाई PTO सहित योग्य हुनुहुन्छ (मार्च १०- मे १,, २०२० हराएको घण्टाको लागि)।
यो खोप अब ओरेगनमा सबै होमकेयर र व्यक्तिगत समर्थन कामदारहरूको लागि उपलब्ध छ। तपाईंको पहिलो खुराक COVID-19 भ्याक्सिनको लागि ठाउँ सुरक्षित गर्न, कृपया जतिसक्दो चाँडो तपाईंको खोप नियुक्ति तालिका गर्नुहोस्!
ओरेगन राज्य को बारे मा जानकारी छ जहाँ तपाईं आफ्नो खोप शट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। विवरणको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
कैसर परमेन्टे दुबै कैसर परमेन्टे सदस्य र गैर-सदस्यहरूका लागि खोप प्रदान गर्दछ। थप जानकारीको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
SEIU 3०3 ले राज्य भरि खोप अवसरहरूको बारेमा जानकारी कम्पाइल गर्दैछ। अधिक जानकारी प्राप्त गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
कामदारहरूले केही काउन्टी स्वास्थ्य विभागहरू द्वारा स्थापित क्लिनिकहरूमा खोपहरू पनि लिन सक्छन्। विवरण यहाँ।
COVID-19 खोपहरू क्लिनिकल परीक्षणहरूमा होशियारीका साथ मूल्या been्कन गरिएको छ र एफडीएद्वारा अनुमोदित भएको छ किनकि उनीहरूले तपाईंलाई COVID-१ get पाउनु पर्ने सम्भावना कम हुन्छ। खोप लिने र आफै र अरूलाई बचाउन सीडीसीका सिफारिसहरूको पालना गर्ने संयोजनले COVID-19 बाट उत्तम सुरक्षा प्रदान गर्दछ र यस रोगलाई हराउन मद्दत गर्दछ।
तपाईलाई खोप लिन कर लगाउने कुनै जनादेश छैन। तर हाम्रो युनियनले स्वास्थ्य सेवाकर्मी, आवश्यक कामदार, र आम जनतालाई COVID-१ eliminate लाई हटाउन र यस महामारीबाट पुनर्निर्माणको प्रक्रिया सुरू गर्न खोप लिन आम जनतालाई समर्थन गर्दछ।
COVID-19 परीक्षण लाभ योग्य कामदारहरूको लागि अस्थायी आधारमा उपलब्ध छ। यो कार्यक्रमको लागि विशेष कोष समाप्त नभएसम्म यो उपलब्ध हुनेछ।
यो लाभको लागि योग्य हुनको लागि, तपाईं हाल बेनिफिट ट्रस्ट-योग्य हुनुपर्दछ परीक्षण बेनिफिटको लागि तपाईंको दर्ताको मिति अनुसार। त्यहाँ प्रति प्रति सहभागी एक परीक्षण छ।
COVID परीक्षण बेनिफिट पहुँच गर्नका लागि तपाईंले यी हुनुपर्दछ:
मोबाइल अनुप्रयोग डाउनलोड वा मार्फत इनोभरे प्रबन्धन प्लेटफर्ममा दर्ता गर्नुहोस्
वेबसाइट (IDSQI.com)। यदि तपाईंसँग इन्टरनेट पहुँच छैन भने, तपाईं इनोभरेको हेल्पलाईन पनि कल गर्न सक्नुहुनेछ
1 63१-40०3-0062 तपाईंको नाम र फोन नम्बर छोड्न, र तपाईं प्रमाणित गर्न फिर्ता कल प्राप्त गर्नुहुनेछ
आवश्यक छूट र रिलीज गर्न सहमत।
परीक्षण पूरा गर्नुहोस् जुन तपाईंलाई स्व-प्रशासकमा पठाइन्छ।
परीक्षण फिर्ता प्रयोगशालामा फिर्ता फिर्ता स्व-सम्बोधित मेलरमा प्रदान गर्नुहोस्।
प्रयोगशालामा पहुँच गर्न
सबै किट अनुरोधहरू इनोभरे अनुप्रयोगको माध्यमबाट हुनुपर्दछ (तपाई मोबाइल अनुप्रयोग प्रयोग गर्नुहुन्छ वा कल सेन्टर) - कुनै कागज अनुरोधहरू प्रशोधन गरिने छैन।
टेस्टिंग परिणामहरूमा पहुँच गर्न
तपाईंको परीक्षण परिणामहरू सीधा इनोभरे साइटमा डेलिभर गरियो, जसले तपाईंलाई रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दछ र सचेत गराउँछ कि तपाईंको परीक्षा पूरा भएको छ। अर्डर र परिणामहरू इलेक्ट्रोनिक हुन्। त्यहाँ कुनै कागज फारम वा छैन
कार्यक्रमले केवल निःशुल्क COVID-19 परीक्षण प्रदान गर्दछ। केवल तपाईं परीक्षणको साथ अनुसरण र कुनै पनि परिणाममा स्वास्थ्य निर्णय लिने जिम्मेवार हुनुहुन्छ। बेनिफिट ट्रस्टले परीक्षण परिणामहरूको शुद्धताको ग्यारेन्टी गरिरहेको छैन र COVID-१ for को लागि परीक्षण वा उपचारमा कुनै अनुगमन प्रदान गरिरहेको छैन।
मोबाइल अनुप्रयोग द्वारा:
Google Play वा App Store बाट "IDSQI" खोज्नुहोस्।
IDSQI अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस् र "साइन अप गर्नुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस्।
प्रमाणिकरण ईमेलको लागि पर्खनुहोस् र / वा अनुप्रयोग प्रमाणिकरणमा।
लग ईन, छूट र जारी गर्न को लागी सहमति।
अर्डर राख्न "किट अनुरोध" क्लिक गर्नुहोस्।
Www.IDSQI.com मा जानुहोस् र दर्ता पूरा गर्न "सदस्य साइन अप" क्लिक गर्नुहोस्।
मुख्य मेनूमा क्लिक गर्नुहोस् (पृष्ठको माथि दायाँ तिर तीन लाइनहरू) र मेनुको तल "प्रोफाइल" क्लिक गर्नुहोस्।
Inn 63१-40०3-00००62 मा इनोभरेको हेल्पलाइन कल गर्नुहोस्, र रेकर्ड गरिएको लाइनमा तपाईंको नाम, आईडी, र अन्य योग्यता प्रमाणिकरण डाटा प्रदान गर्नुहोस्।
कल सेन्टर प्रतिनिधि छूट र रिलीजको लागि सहमति पढ्नेछ (तपाईं सहमति र रिलीज गर्न सहमत हुनुपर्दछ)।
कल सेन्टरले तपाईको फोन नम्बर र प्रोग्राम सचेतहरू प्राप्त गर्ने मनपर्दो विधि प्रमाणित गर्दछ।
यदि त्यहाँ कुनै फोन छैन भने तपाईले दैनिक जाँच गर्न सहमत हुनुपर्नेछ।
तपाईंले शिपिंग ठेगाना प्रदान गर्नुपर्नेछ।
तपाईंले किट आईडीको साथ फिर्ता कल गर्नुपर्नेछ जब तपाईं यसलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ।
धेरै होमकेयर र व्यक्तिगत समर्थन कामदारहरूले कागजात गर्नका लागि अनुरोध गरे कि उनीहरू हेरचाह प्रदायक हुन्, र त्यसैले आवश्यक कामदारहरू। यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र फाराम पूरा गर्नुहोस्, र तपाईंलाई एक आवश्यक कामदार हो भनि प्रमाणित गर्दै तपाईंलाई एक पत्र ईमेल गरीन्छ।